Fa maninona no sarotra be ny fiainana? - Blog
Ny ankamaroan'ny olona dia manontany tena amin'ny tenany matetika io fanontaniana io.
Raha tsy mpandray vola ianao ary tsy miasa, salama tsara, manan-janaka ho an'ny zanakao, ary andraikitra vitsy horesahina, dia manontany tena ianao momba izany koa.
Ny fikarohana an-tranonkala tsotra momba io fanontaniana io dia hamaly ny karazana valiny rehetra…
Ireo dia manomboka amin'ny 'mampihetsi-po be loatra isika' ka hatramin'ny 'toy izany ny fiainana: miatrehana izany.'
Betsaka ihany koa ireo valinteny glib milaza fa sarotra ihany ny raharaha raha tsy manaiky drafitra masina vitsivitsy isika, na ny toetrantsika manokana no mamaritra ny fahasambarana na ny adin-tsaina.
'Ady ho an'ny olona rehetra sy ny zava-drehetra ny fiainana'
Azo antoka fa mety ho marina amin'ny ambaratonga maro io, fa ny milaza fa amin'ny olona iray izay mitsabo tena tsy tapaka fotsiny mba hitazomana ny tenany tsy hiantsoantso dia mampidi-doza tokoa.
Mbola ratsy kokoa aza ny karazana fampielezan-kevitra izay ilazana ny olona fa tsy maintsy mamorona ny fahasambarany manokana…
… Fa raha mahita ny fiainana sarotra izy ireo, dia satria izy ireo kevitra sarotra ho an'ny tenany izany.
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahatsapa ny fomba manimba mety holazaina amin'ny olona iray.
Ny filazako zavatra iray amin'ny vokatry ny 'oh, sarotra ny fiainana ho an'ny zava-manan'aina velona rehetra, inona moa ny fikatsahana sakafo sy fialofana ary toy izany' izay tena sarotra.
Ankoatr'izay, fanilihana izany tena rea l olana tsy maintsy atrehan'ny olombelona.
Eny, ny zava-miaina rehetra dia miatrika fahasarotana sasany raha te hiroborobo izy, saingy misy goavana tsy fitoviana eo.
Ny sifotra izay manana olana amin'ny fitadiavana sakafo hotehirizina ho an'ny ririnina dia zara raha azo ampitahaina amin'ny ray aman-dreny tokan-tena miaina anaty fahantrana ao amin'ny tanàna iray izay tsy nanana rano fisotro madio nandritra ny taona maro.
Tsy mila mieritreritra fiantohana ara-pahasalamana ho an'ny zanany io squirrel io, na fotoam-pitsaboana mety hitranga raha mijanona ny fandoavan-trosan'ny oniversite sns.
Ny olona iray izay tratry ny fiasan-doha, miatrika olana momba ny fitazomana amina vady taloha mpanararaotra dia hanana fahasahiranana hafa noho ny olona iray avy amin'ny foko vitsy an'isa izay miatrika fanavakavahana sy fanorisorenana tsy tapaka.
Mirongatra ny mponina ary zara raha misy ny asa. Mety manana olana amin'ny fitadiavana asa any amin'ny sahaninao ianao. Na misy asa mihintsy, avelao ihany ny karama mendrika.
Tsy fahita firy ho an'ireo matihanina manana asa maharitra ny miasa ho mpamily Uber amin'ny faran'ny herinandro mba hanampy amin'ny fivelomana.
Niresaka tamin'ny olona maromaro aho rehefa nikaroka momba an'ity lahatsoratra ity, ary ny sasany tamin'ny tantaran'izy ireo dia nahakivy ahy tanteraka.
Ankoatr'izay, nampahafantatra ahy izy ireo fa tsy misy valiny 'iray habe mifanaraka amin'ny rehetra' amin'ny antony mahatonga ny fiainana ho sarotra be.
- Ray aman-dreny tokan-tena izay mikarakara zaza kely marary roa, rehefa miatrika olana ara-batana sy ara-tsaina manokana.
- Tanora trans iray izay ny fianakaviany mpandala ny nentin-drazana sy mpivavaka dia nandà azy ireo ankehitriny, izay miaina anaty fikorontanana tanteraka ara-pihetseham-po, mifanaraka amin'ny fanovana vatana vaovao, irery.
- Olona avara-pianarana sy antonony izay tsy maintsy nandray ny asa tsinontsinona azy ireo, noho ny loza tampoka dia tonga mpikarakara tokana an'ireo mpianakavy marefo izy ireo.
- Tanora tanora izay misy poizina ny fiainam-pianakaviany ka mahita fialan-tsiny hialana aminy, ary ao anatin'ny fifandraisana am-pitiavana tsy salama fotsiny mba hanana toerana azo antoka itsoahana.
- Olona mahay mamorona mahay miaina anaty fahantrana lalina satria zara raha misy ny asa, ary ny ankamaroany dia omena ny olona any ampitan-dranomasina vonona (sy afaka) hiasa amin'ny denaria.
Santionany amin'ireo tantara nozaraina tamiko ireo, ary asehon'izy ireo ny fomba mety hananan'ny fiainana sarotra tokoa ho an'ny rehetra, na dia amin'ny fomba samy hafa be aza.
'Tsy misy hazo tafavoaka velona irery ao anaty ala.'
Fantatrao angamba ilay teny nindramina: 'Mila vohitra ny fitaizana zaza iray,' midika izany fa mila mamboly olona iray ho tonga olon-dehibe salama ny mpikambana tsirairay ao amin'ny vondrom-piarahamonina iray.
Horaisiko lavitra kokoa io dingana io miaraka amina teny reko tamin'ny fandaharana Ny OA :
Tsy misy hazo velona irery irery any anaty ala.
Mety hihevitra ny hazo ho toy ny mpitily irery isika, saingy tsy lavitra ny fahamarinana izany. Ny tsirairay dia ao anatin'ny tontolo iainana sy tontolo iainana sarotra.
Ity dia sombintsombiny iray avy amin'ilay lahatsoratra Mifampiresaka ve ny hazo? avy ao amin'ny The Smithsonian Magazine:
Ny hazo be antitra hendry dia mamahan-tsiramamy siramamy ranom-boaloboka ary mampitandrina ny mpiara-monina rehefa akaiky ny loza
Ny tanora tsy salama dia miatrika loza mety hitranga amin'ny fandatsahana ravina, fanenjehana maivana ary fisotroana tafahoatra ary matetika mandoa ny ainy.
Miandry ny fianjeran'ireo mpanjaka taloha ireo andriana satro-boninahitra, mba hahafahan'izy ireo maka toerana eo amin'ny hazavan'ny masoandro.
Ny hazo rehetra dia mifandray amin'ny alàlan'ny tamba-jotra mycialia (holatra) ambanin'ny tany, ka mamorona «… fifandraisana miasa, mifampiankina, tantanan'ny fifandraisana sy ny faharanitan-tsaina mitovy amin'ny zanatany bibikely.
Inona no ifandraisan'izany amin'ny fahasahiranan'olombelona?
Tsotra fotsiny, maro amintsika no mamaky ny lalantsika amin'ny fiainana nefa tsy anisan'ny vondrom-piarahamonina marina.
Raha tsy misy ny fanohanana mety ho hita amin'ny fiaraha-miasa.
Tsy misy foko.
Ny fikolokoloana tena / ny fandanjana ny fiainana mahasalama dia mora kokoa noho ny vita
Nandritra ny antso an-tariby tao amin'ny media sosialy, nanana valiny marina sy marina avy amin'ny olona izay zara raha mitazona azy aho.
Tsy dia mahita an'ity haavon'ny fahamarinana ity isika amin'ny kolontsaintsika amin'izao fotoana izao sy ny kolontsaina fifaliana ambonin'izay, fa ny valiny toa ireo kosa dia miresaka betsaka momba ireo tolona atrehin'ny maro:
Torovana aho izany. Mandritra ny fotoana rehetra, tena reraka.
Nifoha reraka aho, nihazakazaka tontolo andro nanandrana nanatratra, avy eo nianjera teo am-pandriana, tsy nanana fotoana nahatsiarovan-tena mihoatra ny roa sosona tamina tenako mba hisotro dite, hamaly ny lahatsoratra Facebook, na hanosotra sakafo haingana ao am-bavako.
Ireo lahatsoratra 'manome aingam-panahy' ireo dia tsy manampy koa: 'maka fotoana ho anao satria fohy ny fiainana ary tsy hiresaka momba ny tranonao madio ny olona amin'ny fandevenana anao.'
Tsy manisy fiheverana izy ireo fa raha TSY manadio ny fako saka ianao na mitondra ny alika handeha an-tongotra ara-potoana dia misintona eo am-pandriana ny saka ary ny alika miampita amin'ny tapis ary avy eo manana intelo ianao ny asa. miezaka ny ho sitrana amin'izany.
Misy ny vokany amin'ny fanokanana fotoana ho anao: mila sakafo ny ankizy kely, na mosarena. Mila karakaraina ny fianakaviana zokiolona, ​​raha tsy izany dia ho mosarena amin'ny fahalotoany izy ireo.
Tokony hofenoina ny fe-potoana, raha tsy izany dia horoahina ianao. Mila diovina ny trano raha tsy izany dia ho rendrika anaty bibikely sy loto ianao.
Mihazakazaka ara-bakiteny ireo fanafody manaitaitra fanaintainana sy fanafody fanaintainana, fa ny ankamaroan'ny ankamaroantsika dia toa tafavoaka velona amin'ity fomba ity, hanafaingana antsika ary hampiadana antsika avy eo.
Na kafe sy divay, famenon-tsakafo sy fisaintsainana, na kôkainina sy zavamahadomelina, ny ankamaroantsika dia manamboatra tena amin'ny ZAVATRA TOHANA * fotsiny mba hanohizana.
Ny sasany dia 'salama' kokoa noho ny sasany, na dia ny 'salama' (toy ny sakafo faran'izay matanjaka sy ara-panahy) miankina aminy aza ny FITIAVANA ataontsika.
Ka…… fiaraha-monina. Ary reraka be fotsiny aho.
Ny maha-zava-dehibe ny fiarahamonina
Manana namana izay nihalehibe tamina vondrom-piarahamonina ara-pinoana na ara-kolontsaina akaiky aho, izay ara-dalàna sy voajanahary toy ny rivotra miaina ny fiaraha-monina sy ny fiankinana.
Ny namana, ny havan'ny mpianakavy ary ny mpifanila vodirindrina dia mifindra sy miditra isaky ny tranony avy.
Raha misy manan-janaka vaovao, azonao antoka fa misy 'nenito' hafa am-polony manampy ao an-trano: mikarakara ilay kely, mitazona sakafo ny zokiny, manome toky fa mahazo fotoana be dia be amin'ny fanarenana i mama.
Toy izany koa no nanjo raha nisy mpianakavy narary, na raha nisy maty tampoka.
Ity firaisam-pirahalahiana ity dia tsy voafetra tamin'ny fikomiana lehibe ihany koa: ny fitsidihana isan'andro, ny fiaraha-misakafo isan-kerinandro, ny fivoriana tsy tapaka sy ny fitsangatsanganana ary ny fankalazana dia ampahany amin'ny fiainana andavanandro.
Nahoana no nampalahelo ilay tianao
Afaka pop 'boribory ny olona mindrana siramamy kapoaka, manampy amin'ny fananganana tokotanin-tsambo, na mihantona eny an-tokontany amin'ny hariva fahavaratra mafana.
Nieritreritra an'ity aho vao haingana momba ny hoe firy amintsika no miaina fiainana mitokana matetika.
Mety hanana fianakaviana nokleary matanjaka isika, miaraka amina mpiara-miasa, zanaka, angamba ray aman-dreny na roa, fa izay ihany.
Ny ankamaroantsika aza tsy mahalala ny mpifanila vodirindrina amintsika, avelao hiara-miasa amin'izy ireo matetika.
Omeko ohatra manokana ianao:
Taona maro lasa izay, izaho sy ny namako dia nanapa-kevitra ny hifindra any amin'ny tanàna ambanivohitra any amin'ny faritany hafa hialana amin'ilay fitoeran-tongotra manimba fanahy izay nataonay tao afovoan-tanànan'i Toronto.
Ity fihetsika ity dia misy ny fatiantoka sy ny tombony azo avy aminy.
Mipetraka amin'ny toerana milamina sy maitso isika, miaraka amin'ny rivotra madio, toerana maitso ary sakafo an-trano.
Koa satria ambany dia ambany tokoa ny vidim-piainana eto, dia tsy mila miasa 70-herinandro handehanana isika. Manam-potoana handrahoana sakafo, hamakiana, hanaovana yoga ary hisaintsainana.
Ny tsy ananantsika dia io fahatsapana fiarahamonina voalaza etsy ambony io.
Dia lavitra ny mpifanila vodirindrina amintsika akaiky. Tsy misy itovizantsika amin'izy ireo, ary misy aza ny sakana amin'ny fiteny, satria ny fitenim-paritra frantsay any ambanivohitra lazain'izy ireo dia tsy mitovy amin'ny zavatra nianaranay tany am-pianarana.
Tsy safidy ny fihaonana amin'ny namana ho an'ny kafe, satria 550km no misy ny vondrom-piarahamonina akaiky nambolentsika.
Azo antoka fa manana chat video sy antso an-tariby isika, saingy tsy dia mitovy izany, sa tsy izany?
Toy izany koa amin'ny fikarakarana ny zaridainam-pokonolona, ​​na ny «barbecue group». Na fifandraisana maika.
Fantatsika tsara ihany koa ny filan'ny vondrom-piarahamonina, ary antenaina fa hifindra any amin'ny toerana hahitantsika fifandanjana eo amin'ny fiainana malefaka, sy ny fatorana eo amin'ny fiaraha-monina matanjaka.
Saingy indray, miaraka amin'ny fiainana maoderina ho toy ny frenetic sy mitaky izany, tsy maintsy ataontsika laharam-pahamehana .
Mitokana irery, na vondrom-piarahamonina any amin'ny toerana misy fihenjanana?
Aiza ny marimaritra iraisana?
Misy ve tany afovoany?
Heveriko fa ho tapa-kevitra izany.
Ny filàna tanteraka amin'ny fifandanjana amin'ny vatana / saina / fanahy
Ankoatry ny filàna mafy hamelomana indray ny vondrom-piarahamonina dia manaintaina ny olona ny mahita fandanjana tena izy amin'ny fiainany.
Betsaka ny miasa amin'ny taolana fotsiny mba hahitana izay fivelomany, izay mamela fotoana kely (na tsia) hiarahana amin'ny olombelona, ​​famoronana, ary fikolokoloana tena.
Ny valiny iray hafa azoko tamin'ny fiantsoana ahy tamin'ny media sosialy dia avy amin'ny namako mpampianatra iray antsoina hoe Ariadny izay nanana izany hizarana:
Ny soatoavin'ny kolontsainay dia misavoritaka tanteraka sy mihemotra amin'izay tokony ho izy.
Niasa tamin'ny tany izahay ary nolazaina fa hirehareha amin'ny maha-be atao azy. Manoloana ny fotoana iarahana amin'ireo olona tiantsika, dia asaina mionona isika, ireo mpiara-miombon'antoka amintsika, ireo zanatsika miaraka zavatra .
Lazaina amintsika fa zavatra ara-nofo ny zavatra iray.
Nolazaina taminay fa safidy ny kanto - tsy ampahany voalohan'ny zavatra niainantsika olombelona.
Tapaka amin'ny fanahy isika, na inona na inona dikan'izany ho an'ilay olona.
Tsy mahazo miasa amin'ny hafainganam-pandehan'ny olombelona isika: tantely mpiasa tsy manara-dalàna fotsiny.
Olona tsy tambo isaina no nifanaraka tamin'ny fanambarany, ary hitako fa mandriatra ny masoko ary miforitra miaraka amin'izy ireo.
Tadidiko hoe nanao ahoana ny fiainana toy izany, niasa asa telo tany Toronto mba hivelomana fotsiny.
Mampivarahontsana ny fieritreretana fa izany rehetra izany no misy ny olombelona misy fahagagana nomena antsika.
Mandeha mandritra ny andro tsy voafetra ao amin'ny cubicle na birao, manao asa izay tsy hisy dikany mihitsy ao anatin'ny folo na roa…
… Miandry fotsiny ny fialan-tsasatry ny taona vitsivitsy amin'ny faha-70 taonantsika, raha toa ka mahay manangona vola ampy hiatoana isika.
Tsy maintsy misy zavatra hafa ankoatr'izay, tsy mila tolona tsy tapaka tsy misy farany.
Fotoana hamoronana, ohatra, na sary hosodoko, tononkalo, na voatabia poti vitsivitsy eo amin'ny lavarangana.
Fotoana tso-po miaraka amin'ireo olona tiantsika.
Fombafomba fikolokoloana tena sy fankalazana ara-panahy.
Inona no azontsika atao mba hahamora ny fiainana?
Matetika dia sarotra kokoa ny fiainana noho ny antony ivelany izay tsy voafehintsika.
Antenaina isika fa ho mpiasa tsara (sy mpiara-miasa mpiara-miasa)…
Mahazoa vola sy mandany vola, tohizo ny fisehoana, mankanesa amin'ireo zava-dehibe notakiana tamin'ny fiarahamonina…
Mifanaraka, ary ampidiro ao anaty boaty azo ekena, ary miasà toa ny tsy misy ezaka rehetra.
Manampia haino aman-jery sosialy ankehitriny momba ny tokony ho endrikao sy ny fihetsikao, ary vao mainka sarotra ny fiainana.
Ny zavatra andrasana dia tsy azo tanterahina intsony, ary ireo antenaina ireo dia terena amin'ny olona aloha sy taloha.
Afaka manamaivana isika betsaka ny fahantrana manokana amin'ny alàlan'ny fametrahana izay tena zava-dehibe amintsika, ary inona no tsy ilaintsika, ary izay azontsika atolotra ny hafa.
Raiso ny journao ary penina ary apetraho amin'ny tenanao ireto fanontaniana manaraka ireto:
Inona avy ireo zavatra manan-danja indrindra izay tsapanao fa mila mivoatra?
Lafiny inona amin'ny fiainanao no hitanao fa sarotra indrindra?
Ahoana no ahafahan'ny olon-kafa manampy anao?
Ahoana no hanampianao ny hafa?
Iza amin'ireo andrasana eo amin'ny fiaraha-monina no mahatonga anao hahatsapa lolompo?
Ankafizinao ve ny asa ataonao?
Raha tsy izany dia karazana asa inona no handrehitra ny fanahinao?
Manana fanantenana amin'ny fiainana ve ianao tokony mitovy?
Manampy anao tsy sambatra ve izany fanantenana izany?
Ho mora kokoa ve ny fiainanao raha ianao avelao ireo fanantenana ireo ?
Ny famaliana ireo fanontaniana ireo dia mety hanolotra fahitana kely momba ireo adin-tsaina lehibe atrehinao.
Raha vantany vao hitanao izy ireo dia azonao atao ny mieritreritra ny fametrahana drafitra mba hiasa amin'izy ireo.
Raha tsapanao fa maniry / mila manana vondrom-piarahamonina matanjaka ianao dia eritrereto ireo anton-javatra isan-karazany tianao hananana manodidina anao.
Te-hanodidina ny tenanao amin'ireo olona mitovy finoana aminao ara-panahy ve ianao?
rahoviana no mivoaka ny amerikanina rehetra
Sa ireo manana fahalianana amin'ny famoronana?
Ny vondrom-piarahamonina ara-panahy sy ara-pinoana dia matetika mandray tsara, saingy misy vondron'olona isan-karazany tsy tambo isaina azonao ampidirina, miorina amin'ny fitiavanao manokana.
Mahatsapa aho fa zava-dehibe ny manonona eto fa ny tombontsoa dia mitana andraikitra lehibe raha ny fiarahamonina no resahina.
Mampalahelo fa misy ny olona iharan'ny tsy rariny, tsy hajaina ary atao mahatsapa ho tsy mendrika amin'ny vondrom-piarahamonina isan-karazany mifototra amin'ny karazan-javatra isan-karazany.
Ny fiaviana ara-pirazanana, ny fivavahana, ny toerana misy eo amin'ny fiaraha-monina, ny olona mahay mirary, ary ny miralenta dia toetra vitsivitsy fotsiny izay mety hahatonga ny olona hahatsapa ho ankasitrahana ao anaty vondrona iray, na hahatonga azy ireo hahatsiaro ho voahilikilika sy tsy ilaina.
Raha nampijalian'ny vondrona antenainao hiditra ianao dia mety hisalasala manandrana indray sao matahotra holavina na haratra ianao.
Azo takarina tanteraka izany, ary azafady fa niaina izany karazana faharatsiana izany ianao.
Manantena aho fa afaka mahita vondrona iray izay mankasitraka sy mandray anao amin'ny fomba mendrika ny fandraisana anao.
Raha efa anisan'ny vondrom-piarahamonina iray ianao dia manontania tena raha misokatra sy mandray ny mpikambana vaovao ianao, na raha misy fitongilanana manokana mila iasanao.
Misy toerana foana hianarana, sy hanatsarana, ary hitombo, ary hahasitranana, raha avelantsika hanao izany.
Tsy natao handeha samirery ny fiainana isika. Ny fitokanana ara-tsosialy dia manimba ny fahasalamantsika ankapobeny , ary indrindra ny fiadanantsika ara-pihetseham-po sy ara-tsaina.
Ny famerenana ny fahatsapana fiarahamonina matanjaka - ary ny fahalalana fa tsy maninona ny miankina amin'ny hafa rehefa ilaintsika izy ireo - dia mety tsy hamaha ny zava-tsarotra rehetra amin'ny fiainana, fa azo antoka fa hahatonga azy ireo ho zaka kokoa izany.
Te hanana fiainana mora kokoa noho ny ankehitriny ve ny fiainanao? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
inona ny ohatra iray mavitrika amin'ny fahasalamanao?
fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy sy ny fitiavana
ny fomba hanampiana ny namana mandalo fisarahana
i John cena no feon'i honda
firy taona i joey avy amin'ny namana
tsy misy tarehy vs tsy tarehy